3 Saa bere no nyinaa na abofra Samuel resom+ Yehowa wɔ Eli anim; ná Yehowa asɛm+ ho ayɛ na saa nna no mu,+ na anisoadehu+ nni hɔ. 2 Ɛbae sɛ da bi na Eli da ne dabere; ná n’aniwa ayɛ wusiwusi+ na onhu ade. 3 Ná Onyankopɔn kanea no nnya nnumii, na Samuel da Yehowa asɔrefie+ hɔ, faako a Onyankopɔn adaka no wɔ no. 4 Na Yehowa frɛɛ Samuel, na ɔkae sɛ: “Mini.”+ 5 Ɛnna otuu mmirika kɔɔ Eli nkyɛn kɔkae sɛ: “Mini; worefrɛ me.” Nanso ɔkae sɛ: “Memfrɛɛ wo. San kɔda.” Ɛnna ɔkɔdae. 6 Na Yehowa frɛe bio sɛ: “Samuel!”+ Na Samuel sɔree na ɔkɔɔ Eli nkyɛn kɔkae sɛ: “Mini; worefrɛ me.” Nanso ɔkae sɛ: “Me ba,+ memfrɛɛ wo. San kɔda.” 7 (Samuel de, ná onnya nhuu Yehowa, na na wonnya mfii ase nyii Yehowa asɛm nkyerɛɛ no.)+ 8 Na Yehowa frɛe bio ne mprɛnsa so sɛ: “Samuel!” Ɛnna ɔsɔree na ɔkɔɔ Eli nkyɛn kɔkae sɛ: “Mini, migye di sɛ worefrɛ me.” Ɛnna Eli hui sɛ ɛyɛ Yehowa na ɔrefrɛ abofra no. 9 Enti Eli ka kyerɛɛ Samuel sɛ: “Kɔda, na sɛ ɔfrɛ wo a ka sɛ, ‘Yehowa, kasa na w’akoa retie.’” Na Samuel kɔdaa ne dabere. 10 Na Yehowa bae begyinaa hɔ frɛe sɛ kan no sɛ: “Samuel, Samuel!” Ɛnna Samuel kae sɛ: “Kasa, na w’akoa retie.”+ 11 Na Yehowa ka kyerɛɛ Samuel sɛ: “Hwɛ! Merebɛyɛ+ ade bi wɔ Israel, na obiara a ɔbɛte no, n’aso abien nyinaa mu bɛyɛ no yɔnn.+ 12 Ɛda no na mɛma nea maka atia Eli fie nyinaa aba mu fi mfiase akosi awiei.+ 13 Na ka kyerɛ no sɛ merebu ne fie atɛn+ akosi daa, bɔne yi nti, efisɛ onim+ sɛ ne mma adome Onyankopɔn,+ nanso wanka wɔn anim.+ 14 Ɛno nti na maka ntam agu Eli fie so sɛ, afɔrebɔ anaa ayɛyɛde biara rentumi mpopa Eli fie bɔne ho asotwe a ɛrebɛba no da.”+ 15 Na Samuel daa hɔ kosii anɔpa. Na obuebuee Yehowa fie apon no.+ Na Samuel suroe sɛ ɔbɛka nea ohui no akyerɛ Eli.+ 16 Ɛnna Eli frɛɛ Samuel sɛ: “Me ba Samuel!” Na ɔkae sɛ: “Mini.” 17 Na ɔkae sɛ: “Asɛm bɛn na ɔka kyerɛɛ wo? Mesrɛ wo mfa nhintaw me.+ Sɛ wode asɛm a ɔka kyerɛɛ wo no biako mpo hintaw me a, Onyankopɔn ntua wo ka na ɔnsan mfa bi nka ho.”+ 18 Enti Samuel kaa nsɛm no nyinaa kyerɛɛ no, na wamfa biribiara anhintaw no. Ɛnna ɔkae sɛ: “Ɛyɛ Yehowa. Nea eye n’ani so no, ma ɔnyɛ.”+ 19 Na Samuel nyinii, na Yehowa dii n’akyi,+ na wamma ne nsɛm mu biara antɔ fam.+ 20 Na Israel nyinaa, efi Dan kosi Beer-Seba,+ behui sɛ Samuel na wɔde no asi hɔ sɛ ɔnyɛ Yehowa diyifo.+ 21 Na Yehowa yii ne ho adi bio+ wɔ Silo, efisɛ Yehowa nam Yehowa asɛm so yii ne ho adi kyerɛɛ Samuel+ wɔ Silo.